तरल प्रसंस्करणको लागि अल्ट्रासोनिक होमोजिनाइजर - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स उच्च शक्ति को डिजाइन र विनिर्माण मा माहिर अल्ट्रासोनिक Homogenizers लागि ल्याब, बेंच-टप र उत्पादन स्तर। अल्ट्रासोनिक पावर लागू गर्न प्रभावकारी र ऊर्जा-कुशल माध्यम हो उच्च कतरनी र तीव्र तनाव तरल पदार्थ, पाउडर / तरल मिश्रण र स्वाद। यसले यसलाई उच्च कतरनी मिक्सरहरू, उच्च रक्तचाप होमगेनरहरू र उत्तेजित मनका मिलिहरूको लागि बलियो विकल्प बनाउँछ।
Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू प्रयोगशाला मिक्सरहरू, उच्च कतरनी मिश्रण उपकरण, पूर्ण-आकार इन्टरनेशनल होमगेनसरहरू वा कण मिलिहरू प्रयोग गर्दै छन्। अनुप्रयोगहरू समावेश छन् मिश्रण गर्दै, विच्छेदन, कण आकार कमी, निकासी र रासायनिक प्रतिक्रियाहरू। हामी जस्तै विभिन्न उद्योग खण्डहरू आपूर्ति गर्छौं नानो सामग्री, पेंट & Pigments, खाद्य & पेय, कस्मेटिक्स, रसायन र ईंधन। हाम्रो बारेमा थप पढ्नुहोस् उपकरणहरू र अनुप्रयोगहरू, वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस अब तपाईंको प्रक्रियाको लागि सही अल्ट्रासोनिक प्रणालीहरूको लागि।
थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
हेलसिचले एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ अल्ट्रासोनिक प्रयोगशाला homogenizers (50 देखि 400W) बियर, टेम्प्लेट ट्यूब या शीशहरुमा नमूना homogenize। प्रवाह कक्षहरू र फ्लास्क एडेप्टरले प्रयोगशालामा अधिक जटिल सेटअपहरूको लागि अनुमति दिन्छ। बन्द स्लीपहरूको सट्टाकरणको लागि, हामी प्रस्ताव गर्छौं VialTweeter।
बेंच-शीर्ष homogenizers (0.5 देखि 2.0 केडब्ल्यू) आवेदन अनुसन्धान, मापन अप कार्य, पायलट अध्ययन, प्रक्रिया अनुकूलन वा सानो ब्याच प्रोसेसिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ। यी प्रोग्रामयोग्य अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू प्रवाह सेल रिएक्टरहरू र पंपहरूमा इन-लाइन प्रशोधनका लागि संयोजन गर्न सकिन्छ।
उच्च भोल्युम इनलाइन प्रोसेसिंग वा ब्याच प्रोसेसिंगको लागि, हामी उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक परीक्षणहरू गर्दछौं (4 देखि 16 किलोवाट)। व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा, यी क्लस्टरहरूमा प्रति घण्टा सय टन प्रशोधन गर्न सकिन्छ। स्वच्छता डिजाइनहरू, र बहु-फिड प्रवाह कक्षहरू तपाईंको प्रशोधन आवश्यकताहरु अनुकूलन गर्न तयार हुने छन्।
जबकि मापन अप एक प्रक्रियाको प्रयोगशालाबाट वा बेंच-माथि स्तर पूर्ण उत्पादन गर्न अन्य मिश्रण प्रविधिहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबसे कठिन कदम हो, यो हो धेरै सरल Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरण संग। यो कारण हो; अवधिमा माथि हामी ड्राइभिङ मापदण्डहरू परिवर्तन गर्दैनौं, जस्तै आयाम वा दबाब।
केही उद्देश्यका लागि 100L सम्मको मात्राहरूको लागि अल्ट्रासोनिक बैचको मिश्रणले राम्रो काम गर्दछ, तथापि अल्ट्रासोनिक इन-फ्लाई प्रवाह सेल रिएक्टरहरू प्रयोग गरेर मिश्रण र एक फिड पम्प बढी प्रभावकारी समाधान हो। एक प्रवाह कक्ष मा अल्ट्रासोनिक पावर एक सानो मात्रा मा अधिक ध्यान केंद्रित गरिएको छ जसको परिणाम अधिक वर्दी प्रसंस्करण र बेहतर उत्पादन को गुणवत्ता हो। प्रवाह कक्षमा दबाब बढाउन एक ब्याक दबाब वाल्व प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले हाउटेक्सनलाई तीव्र रूपमा उच्च हाइड्रोलिक क्यान्सरमा परिणत गर्छ।
अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया र अनुप्रयोगहरू
उद्योग विशिष्ट समाधानहरू
रसायन र सोनो-रसायन
जीव विज्ञान र सूक्ष्म जीव विज्ञान
पेंट, मसी र पिगहरू
प्रसाधन सामाग्री र व्यक्तिगत हेरविचार उत्पादन
ईन्धन, ऊर्जा, तेल र ग्याँस
खाद्य, डेयरी र पेय निर्माण
विशेषताहरू र फाइदाहरू
स्याङ्कनमा ब्याच वा इनलाइन मोडमा
विटेटेड sonication तत्व टाइटेनियम छन्
रिएक्टर स्टेनलेस (316 एल) वा गिलास हुन्
कम रखरखाव, कुनै सानो बाली
अल्ट्रासोनिक रूपमा स्वच्छ-इन-स्थान (CIP) लाई सहयोग गरियो
24hrs / 7days कार्य पूर्ण लोड को तहत
सुधारिएको डिजिटल नियन्त्रण
हाम्रो नयाँ उपकरणहरू उन्नत डिजिटल नियन्त्रणहरूसँग सुसज्जित हुन्छन्, जस्तै टच स्क्रीन, एसडी-कार्ड प्रोटोकल, तापमान नियन्त्रण र ब्राउजर नियन्त्रणका लागि LAN इन्टरफेस। कुनै सफ्टवेयर स्थापना आवश्यक छैन।
उच्च भिषासिटी स्लियरिज
हाम्रो बेंच-माथि र औद्योगिक होमगिनिजले 250,000 सेन्टिओजको चिपचिपा स्वाद सुरू गर्न सक्दछ। 2,000 सीपीएस भन्दा बढी भिसेकोटिहरूको लागि हामी राम्रो युग्मनको लागि प्रगतिशील गुफा पम्पको साथ प्रवाह कक्षहरूको प्रयोग सिफारिस गर्छौं।
सजिलो-देखि-सफा / CIP
Hielscher अल्ट्रासोनिक मिक्सर सजिलै संग पहुँच र सफाई को लागि सेनेटरी फिटिंग संग उपलब्ध छ। अल्ट्रासोनिक cavitation सफा-भित्र-स्थान प्रक्रिया (CIP) लाई सहयोग गर्दछ। – यो स्थानमा एक अत्यन्त शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक क्लीनर हो।
जबकि ट्यांक आविष्कारकहरु लाई त्यहि चिपचिपाहरु को मिस्किल तरल पदार्थ मिश्रण गर्न सक्छन्, विभिन्न चिपचिपापन को तरल पदार्थ या अधिक चिपचिपा तरल पदार्थहरु लाई तेजी देखि र पूर्ण मिश्रण को लागि उच्च यांत्रिक क्यानर को आवश्यकता हुन सक्छ। हाम्रो अल्ट्रासोनिक यन्त्रले सजिलै दुई वा बढी तरल पदार्थ इन-लाइन मिश्रण गर्न सक्छ। यसको लागि, तरल पदार्थ अल्ट्रासोनिक प्रवाह सेल रिएक्टरहरू पहिले नै संयुक्त हुनेछ। मिश्रणको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
Hielscher अल्ट्रासोनिक homogenizers एक सानो र वर्दी विश्वव्यापी वा कण आकार प्राप्त गर्न धेरै प्रभावकारी हुन्छन् जब पाउडर / तरल या तरल / तरल प्रपत्र प्रसंस्करण हुन्छ। उच्च हाइड्रोलिक कतरनी बल अल्ट्रासोनिक्स ब्रेक एग्ग्लोमेमेट्स, बूढी र सेल ऊतक द्वारा साना टुक्राहरु मा उत्पन्न हुन्छ र एक समान फाई आकार को उत्पादन प्रदान गर्दछ। होमगेनसेजरहरूको हाम्रो दायराले प्रयोगशाला वालहरूबाट कुनै पनि प्रोसेसोल्युसन भोल्युमलाई बल्क उत्पादन आकारमा समावेश गर्दछ। Homogenizing को बारेमा थप पढ्नुहोस्!
Hielscher अल्ट्रासोनिक homogenizers तरल पदार्थ मा agglomerates ब्रेक पाउडर कि पारंपरिक एविटरेटर र उच्च कतरनी mixers तोड्न सक्दैन। उच्च गोलाकार क्यानर फैलिएको छ र उच्च विशिष्ट सतहको क्षेत्रको परिणामस्वरूप गहिरो कणहरूलाई समेट्छ। Hielscher अल्ट्रासोनिक homogenizers सजिलै इन-लाइन वा एक ब्याचमा एकीकृत गर्न सकिन्छ। Deagglomerating को बारेमा थप पढ्नुहोस्!
लगभग प्रत्येक उत्पादनको लागि, कण सतह को क्षेत्र को विस्तार र वर्दी वितरण को प्राप्त गर्न को लागि कणहरु अन्य कणों देखि अलग छ कि महत्वपूर्ण छ। समेत फैलावट सजिलै अल्ट्रासोनिक्स द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। Hielscher को अल्ट्रासोनिक्स व्यापक रूपमा micron- र नैनो-दायरामा ठीक-आकार फैझेर उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ। फैलाउने बारेमा थप पढ्नुहोस्!
जब एक पायसीमा अचलनकारी तरल पदार्थहरू मिश्रण गर्दछ, बूलेट आकार र वितरण प्रतिमाको स्थिरताको लागि एक प्रमुख कारक हो। अल्ट्रासोनिक्स धेरै राम्रो आकारको बूंदहरू र सीमित आकार वितरण गर्न सक्छ। अधिकतर अवस्थामा, हाम्रो अल्ट्रासोनिक मिक्सरहरू एक ब्याच वा ईनलाइनमा इमुलेशनहरू तयार गर्दा उपमिक्रोन बबलहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। उच्च दबाव homogenizers देखि अलग, हाम्रो अल्ट्रासोनिक उपकरणों द्वारा उत्पादित उच्च कतरनी भारी ईंधन तेल, जस्तै भारी ईंन्धन तेल (एचएफओ) को उत्तेजित गर्दछ। केही फारमहरू थप्न इम्लिफायरहरू वा स्थिरताहरू हुन सक्छ। यस अवस्थामा अल्ट्रासोनिक्सले इम्युलेफायर समानरूपमा मिश्रण गर्न मद्दत गर्दछ। उत्तेजनाको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक homogenizers विभिन्न सामग्रियों को घुलनशील को लागि एक कुशल र विश्वसनीय साधन हो, जस्तै नमक, शर्करा, सिरप, रेजिन र बहुलक। अल्ट्रासोनिक cavitation द्वारा बनाईएको उच्च स्पीड तरल जेटहरु लाई ठूलो लेआउट मा सीमा लेयर मा वृद्धि गर्छन। यसले तीव्र वा बढी पूर्ण कणहरू वा कण वा उच्च चिपचिपापन तरल पदार्थहरू लाई पराजित गर्दछ। अल्ट्रासोनिक भंगको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक कण आकार घटाउने
हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरले एग्ग्लोमेमेरेट, एग्रीगेट्स र विभिन्न सामग्रीको प्राथमिक कणहरू जस्ता जस्ता टुक्राहरू, धातुको अक्साइडहरू वा क्रिस्टलहरू तोड्न सक्छ। अल्ट्रासोनिक्स ब्याचहरू बीचको कुनै फरक परिवर्तनसँग धेरै समानता र संकीर्ण कण आकार वितरण प्राप्त गर्न सक्दछ। अल्ट्रासोनिक मिलिंग 500 माइक्रोन तल उप-माइक्रोन र नानो-साइज दायरामा दायरामा सबै भन्दा कुशल छ। हाम्रो अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरूले उच्च ठोस भारहरू र उच्च पछाडि भिसेको वस्तुहरू सम्हाल्न सक्छन्। अन्तिम कण आकार उत्पादनको कठोरतामा निर्भर हुनेछ। कण आकारको कमीको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
अधिक अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरू
अल्ट्रासोनिक कण सतह सफा गर्ने
पाउडर कणहरूको सतह वरिपरि तरलसँग अन्तरक्रियाको लागि एक प्रमुख कारक हो। यो ठोस / तरल चरण सीमाहरूमा छ, जहाँ भंग, रासायनिक प्रतिक्रिया वा उत्प्रेरक गतिविधि हुन्छ। अल्ट्रासोनिक homogenization को कण सतह को प्रदर्शन को वृद्धि को तरल चरण को वर्दी deagglomeration र कण आकार को कमी द्वारा। उत्प्रेरक र रासायनिक प्रतिक्रियाको बेला, कण सतह अवशिष्ट भण्डारण, सीमा तह गठन, अक्साइड परत र फ्लोलिंग द्वारा ब्लक गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक cavitation उच्च गति तरल जेटहरु, उच्च हाइड्रोलिक कतरनी र अंतर कण टक्करहरु को कारण कण सतह सफाई को परिणाम हो। Hielscher अल्ट्रासोनिक उपकरणहरु लाई एक बैच या इन-लाइन मा तरल पदार्थ मा कण देखि contaminations को हटाउन को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अल्ट्रासोनिक आन्दोलन र ट्या tan्कहरूको उत्तेजनालाई भरपर्दो उपकरणहरू आवश्यक पर्दछ, विशेष गरी चिसो र भोल्यूम बढाउनको लागि। परम्परागत ट्या tank्क आंदोलनकारीहरू जस्तै प्याडल मिक्सरहरू वा रोटर-स्टेटर मिक्सरहरू विभिन्न कारकहरूद्वारा सीमित छन्, दृश्यता र स्केलेबिलिटी सहित। त्यसकारण, ट्या of्कको उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक आन्दोलन तपाईंको मिक्सिंग प्रक्रियाको लागि सही विकल्प हो किनभने उच्च थ्रु-पुट, समय बचत, कम परिचालन लागत, सुरक्षित अपरेशन (कुनै चालु भाग छैन) र साधारण मर्मतका कारण। अल्ट्रासोनिक ट्या tank्क आंदोलनकारीहरूको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
जब सुक्खा पाउडरहरू मिश्रण गर्दा, सुँगुरहरू, मोटोरेस्टरहरू वा मलहरूसँग मलहरू, पाउडर कणहरूले एग्ग्लोमेमेन्ट्स, लुम्प्स वा तथाकथित बनाउँदछ। “माछा आँखाहरू” (आंशिक रूपमा पाउडर कोरसँग हाइड्रोटेड पाउडर)। Agitators र Stirrers ले केवल यो एग्लगमोमेटेट्स को सतह धोएगा। यो लामो मिश्रण समय र खराब उत्पाद गुणमा परिणामहरू। अल्ट्रासोनिक मिक्सिंग ब्रेक एग्लगलमेमेट्स र एल्ग्लोमेरेट-मुक्त समाधानको लागी लुम्प्स। यसबाहेक, कणो सतहको क्षेत्र सक्रिय गर्न सोनो-रासायनिक प्रभावहरू राम्ररी चिनिन्छन्, जुन फाइदाहरू हुन्छन् जसमा छिटो प्रतिक्रियाहरू र सुधारिएको उत्पादन गुण।
विश्लेषणात्मक उपकरणहरू द्वारा मापनको लागि (जस्तै HPLC, परमाणु स्पेक्ट्रोमीटर, आदि), सामान्यतया सबै भन्दा नमूना तरकारी हुनु पर्छ। यदि नमूना घुलनशील छ भने (जस्तै sucralose, लवण, पाउडर वा ट्याब्लेट फारममा जस्तै) जस्तै विलायक (उदाहरणका लागि पानी, जलीय सल्विन्ट्स, कार्बनिक सल्टेन आदि) मा भंग गर्न सकिन्छ एक सजावटी मिश्रण को परिणामस्वरूप, एक मात्र बनाइएको चरण। भंग गर्ने प्रक्रिया मैनुअल वा मेकेनिकल स्ट्राइकिंग द्वारा गरिन्छ, जुन समय-उपभोग र अपर्याप्त छ। सम्बन्धित समस्याहरू हेरफेरको कारण नमूना हानिहरू छन् वा अनियमित त्रुटि र असामान्य मिश्रण द्वारा reproducibility को कमी।
रासायनिक सक्रियताका लागि अल्ट्रासोनिक्स
रासायनिक प्रतिक्रिया प्रारम्भ गर्न, ऊर्जा आवश्यक छ। प्रायः सक्रियता ऊर्जा को प्रतिक्रिया शुरू गर्न को लागी आवश्यक ऊर्जा को मात्रा र असाधारण रूप ले रहयो हो। अल्ट्रासोनिक ऊर्जाको आगतमा, आकर्षक प्रतिक्रियाहरू पराजित हुन्छन् किनभने रासायनिक प्रतिक्रिया प्रारम्भ गर्न सकिन्छ र मुक्त रेडिकलहरू सिर्जना हुन्छन्। अल्ट्रासाउन्डबाट लाभान्वित सामान्य रासायनिक प्रतिक्रियाहरू sono-catalysis हुन् (जस्तै चरण ट्रांसफर कैटलिस), सिंथेटिक कार्बनिक प्रतिक्रियाहरु, सोलनोलिस साथै साथ sol gel-उत्तरहरू। यसबाहेक, अल्ट्रासोनिक सेनाले अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक सतहहरू सिर्जना गर्दछ, जुन उत्प्रेरक गतिविधि बढ्नको लागि एक महत्त्वपूर्ण प्रविधी हो।
कतरनी बलहरू बढ्ने क्रममा कमजोरीको कमीको घटना क्यान्सर thinning वा thixotropic भनिन्छ। जब एक मध्यमको कण लोड परिमार्जित गरिनु पर्छ जब चिपचिपापनको कमी महत्त्वपूर्ण छ। उच्च ठोस लोड प्राप्त गर्न, पहिलो चरणको चिपचिपापनमा कम हुनु पर्छ। चिपचिपा कमीको पछाडि, सोसाइडहरू थप्न सकिन्छ र माध्यममा फैलिएको छ। अल्ट्रासोनिक cavitation द्वारा बनाईएको उच्च-क्यान्सर बलहरू कडा-पिसाब र बकाया फैलिएको परिणामको कारण हो। यो अनुप्रयोग मुख्य रूप देखि स्प्रे-सुखाने वा स्प्रे-फ्रिज भन्दा छिटो स्प्रेकिङ प्रक्रिया को क्षमता बढाउन वा थियोस्टोप्रोटिक सामाग्री को रेशोलोजी को प्रभावित गर्न को लागी एकीकृत हुन्छ, जस्तै पोलिमर।
अल्ट्रासोनिक गीली मिलिंग
मिलिंग र कण आकार को कमी धेरै औद्योगिक शाखाहरु मा महत्वपूर्ण प्रक्रियाहरु जस्तै पेंट को लागि & कोटिंग्स, inkjet मसी & मुद्रण, रसायन वा प्रसाधन सामग्री। अल्ट्रासोनिक मिलिंग टेक्नोलोजी माइक्रोन र नानो आकारको आकारमा यसको विश्वसनीय साइज कमी र फैलावटको लागि साबित भएको छ। मोती, बबल, र कंकर मिलि भन्दा यसको अपमानजनक बल कुनै पनि मिलिंग मिडिया (उदाहरण मोती / मोती) को घर्षणमा राख्छ जसले घर्षणको कारणले अन्तिम उत्पादनलाई पराजित गर्दछ। बरु, अल्ट्रासोनिक मिलिंग अन्तर-विशेष टक्करमा आधारित छ - यसको मतलब छ कि कणहरू मिलाई हुनुको लागी ग्रस्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसैले मिलिंग मिडिया को समय-सफाई सफाई अब कुनै मुद्दा छैन। उच्च viscosities र ठूलो भोल्युम स्ट्रिमहरू उच्च गुणवत्ता उत्पादनको परिणामस्वरूप प्रशोधन गर्न सकिन्छ। एक औद्योगिक प्रक्रिया लाइन मा एकीकरण को लागि, Hielscher उपयुक्त समाधान को आपूर्ति: clusterizable प्रणाली, आसान एकीकरण / पुनरावृत्ति, कम रखरखाव, सरल संचालन र उच्च विश्वसनीयता। गीली मिलिंग र राम्रो पीस गर्ने बारे थप पढ्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक निष्कर्ष र सेल लिसिस
कोशिका विघटन वा लिसिटी जीवविज्ञान प्रयोगशालामा दैनिक नमूना तयारीको एक सामान्य भाग हो। को लक्ष्य lysis सेल वाल को भागहरु लाई बाधा या जैविक अणुहरु को रिलीज गर्न को लागि पूरा सेल को बाधा को रूप मा छ। भनिन्छ lysate मा प्लाज्मिड, रिसेप्टर एस्टी, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि मा पाइन्छ। पछि lysis अंशहरु, organelle अलगाव वा / र प्रोटीन निकासी र शुद्धि पछि लागी चरणहरु। निकालेएको सामग्री (= lysate) अलग हुनुपर्छ र थप अनुसन्धान वा अनुप्रयोगहरूको विषय हो, उदाहरणका लागि प्रोटोमिक अनुसन्धानका लागि। अल्ट्रासोनिक homogenizers सफल सेल lysis र निष्कर्षण को लागि एक साधारण उपकरण हो। जस्तै अल्ट्रासोनिक तीव्रता प्रक्रिया मापदण्डहरू समायोजन गरेर लैजान सकिन्छ, इष्टतम सोनिकेशन तीव्रता – धेरै नरम भन्दा धेरै गहन देखि भिन्न – प्रत्येक पदार्थ र मध्यमको लागि सेट गर्न सकिन्छ। निकासी र सेल lysis को बारे मा अधिक पढें!
अल्ट्रासोनिक माइक्रोबियल निष्क्रिय
माइक्रोबियल निष्क्रियता खाद्य प्रक्रियामा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। ताजा, हल्का प्रसंस्कृत खानाको लागि बढ्दो मागको कारण उद्योगले थर्मल संरक्षण को माध्यम ले माइडर प्रसंस्करण विधिहरु द्वारा प्रतिस्थापन गरेर ग्राहकहरु को मांग को पालन गर्दछ। अल्ट्रासोनिकेशन एक गैर थर्मल प्रविधि हो जसले सूक्ष्मजीवहरूको निष्क्रियता को लागि अनुमति दिन्छ, जो सबलर्थल तापमान मा संवेदी विशेषताहरु, उत्पादन को पोषण र कार्यात्मक गुणहरुको बेहतर संरक्षण हो। जस्तै सूक्ष्म जीवविज्ञानहरू खाना खरानीको मुख्य कारण हुन्, संरक्षण प्रविधिको तिनीहरूलाई लक्षित गर्नु पर्छ। Sonication को लाभ sonication तीव्रता मा पूर्ण नियन्त्रण र यस प्रकार को विशिष्ट प्रकार माइक्रोबक्स र उत्पादन को अनुकूलन। माइक्रोबियल निष्क्रियता बारे थप पढ्नुहोस्!
धेरै तरल उत्पादहरूमा, भंग भएको ग्यास जस्तै हवा, अक्सीजन वा कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा, डाउन-स्ट्रीम प्रक्रियाहरू वा उत्पादनको गुणस्तरका कारणले समस्या उत्पन्न गर्दछ। घटेको ग्याँस जंगली परिणाम, फोमिंग, माइक्रो बुलबुले वा माइक्रोबियल वृद्धिको परिणाम हुन सक्छ।
अल्ट्रासोनिक विक्ररण अन्तर्गत, भंग गरिएको ग्याँस कोसेवा बुलबुले (निर्वात degasification) को वैक्यूममा निकालिन्छ। ग्यास भरिएको बुलबुले पछि पछि शीर्षमा फ्याट गर्नुहोस् र यसरी हटाउन सकिन्छ। एक तरल को ग्याँस सामाग्री अल्ट्रासोनिक डिससिंग को उपयोग गरेर वायुमंडलीय दबाव मा प्राकृतिक संतुलन को तल देखि कम गरिन सक्छ। डेरासिंगको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
माइक्रो-बुलबुलेका अल्ट्रासोनिक हटाउने
तरल पदार्थ र स्लालहरूमा निलम्बित माइक्रो-बुलबुला धेरै उत्पादनहरूको लागि एक महत्त्वपूर्ण गुणस्तर मुद्दा हो, किनकि यस्तो बुलबुले उत्पादन असक्षमता, माइक्रोबियल वृद्धि, कोटिंगमा धुरी, मेकानिकल अस्थिरता, वा ग्याँस युक्त इन्जेक्स मसीमार्फत अनावश्यक मुद्रण परिणामहरू हुन सक्छ। तरल बल को माध्यम ले प्रचार गर्ने अल्ट्रासोनिक तरंगहरु लाई बुलबुले को ठूलो बुलबुले मा मर्ज गर्न को लागि निलंबित गर्न को लागी शीर्ष मा तैरने छ र यसैले हटाई जान सक्छ। अल्ट्रासोनिकले बुलबुले तरल को माध्यम ले जाने को लागी मदद गर्दछ, जस्तै पानी, तेल वा राल, तेज र अधिक पूर्ण विलय को लागि अग्रणी। माइक्रो बुलबुले हटाउने बारे थप पढ्नुहोस्!
धेरै औद्योगिक प्रक्रियाहरूमा किण्वन, पाचन वा रासायनिक प्रक्रियाहरू, फोमले ठूलो समस्याको कारणले गर्दा यो प्रक्रिया कम नियन्त्रण योग्य बनाउँछ। प्रायः, फोम अनचाहिना द्वारा उत्पाद हो, जुन हटाइनेछ। सामान्यतया विरोधी-फोमिंग रसायनहरू महंगे छन् र अन्तिम उत्पादनको टुक्रा बनाउँछ। यसको विपरीत, अत्यन्त तीव्र अल्ट्रासाउन्ड तरंगहरू (सोनो-डेभोइमिंग) फोम बिना तोडफोड हुन्छ। फोम को विनाश एक नरम, कम ऊर्जा अल्ट्रासोनिक अनुप्रयोग हो। विशेष रूप देखि डिजाइन प्लेट प्लेट सोनोड्रोड उच्च उच्च आयाम हावा पैदा भयो तरंगहरु, जो फोम मा बुलबुले को असक्षम बनाइन्छ ताकि उनि पतन। यो केहि सेकेन्डमा प्राप्त गर्न सकिन्छ र कुनै अवशिष्ट प्रभावहरू छैन। भ्रामक बारेमा थप पढ्नुहोस्!
यद्यपि हीटिंग अधिकतर sonication को मुख्य उद्देश्य छैन, उपचार माध्यम मा गर्मी पीढी को साइड इफेक्ट को उपेक्षित नहीं हुनु पर्छ। नियन्त्रित हीटिंग फायदेमंद छ किनकी धेरै प्रक्रियाहरु गर्मीद्वारा सुधारिएको छ। धेरै प्रक्रियाहरु को समयमा, उदाहरण को संरक्षण या रासायनिक प्रतिक्रियाहरु, अल्ट्रासोनिक उपचार को सर्वोत्तम तापमान द्वारा thermo-sonication को रूप मा जाना जाता द्वारा समर्थित छ। गर्मी-संवेदनशील सामग्रीको लागि, sonication को समयमा लक्षित ठंडा अल्ट्रासोनिक प्रसंस्करण समयमा स्थिर तापमान सुरक्षित। बरफ स्नान लागू गर्न, सेटअपमा ठंडा जैकेटहरू र एकीकृत ताप एक्सचेन्टरहरूसँग प्रवाह सेलहरू, हेलसेस्टरले तपाइँको व्यक्तिगत लक्ष्यहरूको समाधान प्रदान गर्दछ।
उच्च पावर अल्ट्रासाउन्ड मेकेनिकल र माइक्रोबियल स्थिरीकरणमा योगदान गर्दछ। अल्ट्रासोनिक रूपमा उत्पन्न उच्च कतरनी बलहरू एक अत्यन्त राम्रो मिश्रण प्रदान गर्छन् ताकि अन्तर-कण सम्बन्धी सम्बन्धहरू पराजित हुन्छन् र मेकेनिकल स्थिरीकरण प्राप्त हुन्छ। स्थिरता को स्थायित्व ढाँचामा निर्भर गर्दछ: केही इम्युसनहरू र फैलावटहरू धेरै राम्रो र भित्ता पनि बनाइएका कारणले स्थिर-स्थिर हुन्छन्, जबकि अन्य मिश्रणहरू एजेन्टहरू स्थिर गर्नका लागि समर्थित हुन्छन्। यदि स्थिरता चाहिन्छ भने, अल्ट्रासाउन्डले स्थिरतालाई मिश्रणमा मिश्रण गर्न एक धेरै विश्वसनीय उपकरण हो।
जैविक र खाद्य सम्बन्धी उत्पादनहरु को लागि, अल्ट्रासाउंड उत्पादन स्थिरता र संरक्षण को प्राप्त गर्न को लागि माइक्रोबियल निष्क्रियता को भरोसेमंद प्रविधी हो। अल्ट्रासोनिक माइक्रोबियल स्थिरीकरण एक गैर-थर्मल संरक्षण विकल्प हो जसले कुशल माइक्रोबियल ड्याक्टिभ्रेसन र मात्र हल्का ताप उत्पादनको साथ मनाउँछ। E.coli, Salmonellae, Ascaris, Giargia, Cryptosporidium Cysts र Poliovirus जस्तै खाद्यान्न जन्मेका रोगहरूको विनाशमा धेरै प्रभावकारी हुन अल्ट्रासाउन्ड प्रदर्शन गरिएको छ।
अल्ट्रासोनिक कण सतह कार्यात्मककरण
कणको सतहको संरचना कण गुणका लागि महत्त्वपूर्ण छ। कणको विशिष्ट सतह क्षेत्र कण आकार को कमी संग सम्बन्ध मा ठूलो हुन्छ। यसैले, कण आकार को कम गरेर, सतह को गुणहरु लाई तेजी देखि प्रमुख हो - खासकर नैनोलाइजेशन को समयमा। यस्तो सामग्रीको प्रयोगको लागि, सतह विशेषताहरू कण कोर को गुणको रूपमा महत्वपूर्ण छन्। यसको अर्थ यो हो कि nanomaterials को कार्यात्मककरण polymers, nanofluids, biocomposites, nanomedicines, र इलेक्ट्रनिक्स जस्तै एक व्यापक रेंज को सक्षम बनािन्छ। यसले आकारको कमी, deagglomeration, र functionalization कण उपचारमा एक आवश्यक कदम बनाउँछ। Hielscher अल्ट्रासोनिक्स व्यापक रूपमा माइक्रोन र नानो-कणहरूको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ जसलाई मिल, डैगलगोमेरेट, ढाँचा र ढाँचामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कण सतह को परिमार्जन गरेर कणहरुको एक अवांछित एकत्रबाट बचाउन सकिन्छ। डाउनस्ट्रीम चरणहरुमा, अल्ट्रासोनिक रूप देखि संशोधित कणहरु कम्पोजिटहरुमा मिश्रित हुन सक्छ, जहां sonication मैट्रिक्स को भित्र एक विशाल वितरण को प्राप्त गर्दछ। लामो समयसम्म स्थिरता वा हाइब्रिड सामग्रीको मेकानिकल गुण सम्बन्धी फरक-फरक औद्योगिक अनुप्रयोगहरूको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
अल्ट्रासोनिक ईरेरियन परीक्षण
Cavitation erosion प्रतिरोध सामाग्री स्थायित्व र जीवनकाल को एक महत्वपूर्ण पहलू हो। भौतिक कार्यक्षमता सुनिश्चित गर्न, क्यान्सर प्रोभाइज र सामग्री थकानको गुणस्तर आश्वासनको लागि परीक्षण गरिनुपर्दछ। वातावरण को मांग गर्न को लागी उपयोग को लागी सामाग्री को लागि उच्च प्रासंगिकता को लागी क्षैतिज प्रतिरोध को रूप मा जहाज प्रोपेलर्स, (समुद्री) कोटिंग्स, पंप, ईन्जिन घटकों, हाइड्रोलिक टरबाइन्स, हाइड्रोलिक डिनोमीटर, वाल्व, बीयरिंग, डीजल इन्जिन सिलेंडर लिनर, हाइड्रोफाइट, र आंतरिक प्रवाह मार्गहरुमा अवरोध आदि। ASTM मानक G32- 92 अनुसार cavitation erosion परीक्षण गर्न, नियंत्रयोग्य र reproducible अल्ट्रासोनिकेशन अपरिहार्य छ। Hielscher अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरूको नमूनाहरूको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कटाई परीक्षणको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उस्तै अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष परीक्षणका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सीधा परीक्षणको दौरान एक नमूना सोनोट्रोड मा माउन्ट गरिएको छ, जबकि अप्रत्यक्ष विष्फोट परीक्षणको लागि नमूना बेकरमा निश्चित छ। Erosion test पूर्णतया नियंत्रित पर्यावरण परिस्थिति र लगभग हरेक तरल पदार्थमा फैलाउन सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक तीव्रता समायोजन गरेर, एटोसाइभ पावर परीक्षण परीक्षणका लागि अनुकूल गर्न सकिन्छ। Erosion परीक्षणको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक वायर र केबल सफाई
अन्तर्वार्तात्मक सामग्री जस्तै तार, केबल, टेप, रडहरू र ट्याबहरू स्नेहक अवशिष्टहरूको सफा गर्न सकिन्छ, अघि बढ्न अघि अघि बढ्न सकिन्छ, जस्तै कि galvanizing, बाहिर निकाल्ने वा वेल्डिंग। अनन्त सामग्रीको सफाई अक्सर उत्पादन लाइनको बोझले हो। हेलसिच अल्ट्रासोनिक्सले कुशल इनलाइन सफाईको लागि एक अनूठे अल्ट्रासोनिक सफाई प्रक्रिया प्रदान गर्दछ, जुन उच्च माध्यमिक गतिलाई सम्हाल्न सक्छ। अल्ट्रासोनिक पावर द्वारा उत्पन्न गरिएको cavitation को प्रभाव स्नेहन अवशोषण हटाउँदछ जस्तै तेल वा तेल, साबुन, ढोका वा धूल। यसको अतिरिक्त, प्रदूषण कणहरु को सफाई तरल मा फैलिएको छ। त्यसो गर्दा, सामग्रीलाई सफा गर्न एउटा नयाँ आसंजनबाट अलग रहन्छ र कणहरू फिसलिएको छ। अल्ट्रासोनिक सफाई को लाभ एक नजर मा: सिद्ध & विश्वसनीय, कुशल, पर्यावरण-अनुकूल, कम वा कुनै रासायनिक सफाई एजेन्टहरू, प्लग-र-प्ले, मोडुलर प्रणालीहरू, सरल अपरेसन, कम रखरखाव, 24/7 सञ्चालन, सानो पदचिह्न, रिट्रोफिजिबल, अनुकूलन। लगातार निरन्तर सफाईको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक Sieving र निस्पंदन
आकारको अंतरले कणहरूको विभाजन स्क्रिन वा जालको आलोचना चाहिन्छ। सिभिंग र स्क्यानिङको लागि अल्ट्रासोनिक आविष्कार एक सिद्ध उपकरण हो, जसले sieving क्षमता बढाउँछ र समय बचत गर्छ किनभने पाउडरहरू सक्षम छ छिटो र अधिक पूर्ण पार गर्न सक्षम छन्। नतीजा एकदम कम उत्पादन गुणस्तर कम भौतिक क्षति हो जसले अधूरो विभाजनको कारणले - र सबै छोटो प्रकृया समय भित्र। सिभिंग र स्क्यानिङ बारे थप पढ्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक जल उपचार
पानीमा जीवाणु र अल्गा विकासको नियन्त्रण धेरै उद्योगहरूका लागि उत्पादनको लागि अत्यधिक प्रासंगिक अपस्ट्रीम वा डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया हो। शक्तिशाली अल्ट्रासाउन्ड तरंग सेल सेल संरचनाहरु मा सेल प्रभाव र यांत्रिक मृत्यु को कारण र उनको सफाई क्षमता को कारण यांत्रिक प्रभावहरु मा उनको प्रभाव को लागि जानिन्छ।
यसबाहेक, टैंक, बैरल, भाँडाहरू र यहाँका फिल्टरहरू पनि धेरै सरल तर कुशल sonication कदममा biofilms, अवशिष्ट र मलबे देखि सफा गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिक रूपले उत्पन्न मेनेनिकल कम्पनहरू र साइभाइटिकल क्यान्सरहरूले प्रदूषण हटाउँदछ। सामान्यतया, सफा एजेन्सीहरू आवश्यक छैनन् र हटाइएका अवशिष्टहरू सजिलै टाढा जान सकिन्छ।
नानो-सामग्रीको लागि अल्ट्रासोनिक्स
नैनो सामग्रीले लगभग कुनै पनि शाखाका वैज्ञानिकहरू, शोधकर्ताहरू र इन्जिनियरहरूको ध्यान आकर्षित गरे जस्तै नानो-आकारको कणहरूले अनौठो विशेषताहरू देखाउँछन्। तिनीहरूको भौतिक गुणहरू जस्तै ओप्टिकल र चुम्बकीय गुणहरू, विशिष्ट ह्याटहरू, पिघ्ने प्वाइन्टहरू र सतहको प्रतिक्रियाले असाधारण शक्तिहरूसँग सामग्रीको उच्च क्षमता प्रदान गर्दछ। तर सानो कणहरू, अझ गाह्रो हुन्छ उनीहरूको उपचार। उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक्स को प्रभावकारी ढंग देखि नैनो को कण प्रभावी ढंग देखि एकमात्र तरीका हो। बिजुली अल्ट्रासाउन्डको प्रभाव सामग्री रसायन विज्ञान मा गुणा अनुप्रयोगहरूको लागि अनुमति दिन्छ & विकास, उत्प्रेरक, इलेक्ट्रनिक्स, ऊर्जा, साथै जीवविज्ञान & चिकित्सा।
अधिकतर, उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक्स मात्र कुशल उपकरण हुन् वांछित मिलिंग र नैनो कणहरु को परिणामहरु फैलाने को लागि (जस्तै नैनोट्यूब, ग्राफीन, न्यानोडीरेरा, सिरेमिक, धातु ओक्साइड आदि)। वैकल्पिक रूपमा, अल्ट्रासोनिक रूपले सहयोग गरिएको आंशिक वा अनावश्यक रूपान्तरणको तल-अप संश्लेषण अद्वितीय गुणहरूसँग शुद्ध नैनो क्रिस्टल सिर्जना गर्न एक कुशल तरिका हो। विशेष रूप देखि, धातु नैनो को कण, मिश्र धातु र organometallic कम्पोजिट विशेष रुचि आकर्षित गर्छन, किनकि औद्योगिक क्षेत्र मा धातुहरु को महत्व को महत्व हो। यहाँ पनि, sonication अद्वितीय परिणाम प्रदान गर्दछ जस्तै टिन कोटिंग एल्युमीनियम र टाइटेनियम कणहरु।
अल्ट्रासोनिक तल उल्टा संश्लेषण
आउँदो वा तल-माथि संश्लेषणमा परमाणु, अणुहरू र आयनहरूको नियन्त्रण संरचनाले ठूलो रासायनिक यौगिकहरूलाई वर्णन गर्दछ। Precipitation उत्पादनहरु को शुद्धि को लागि पनि उपयोगी छ। वर्षाको फायदा यो विधिले लगभग वर्दी रूपको सानो कण, कण / क्रिस्टल आकार र माणुपोलिकी प्राप्त गरेको छ। उच्च शुद्धताको नानोको कणको उत्पादनको लागि, आणविक र आणविक घटकहरूको स्व-संगठन प्रायः इच्छित गुण प्राप्त गर्न मात्र हो। वर्षाको रूपमा धेरै छिटो प्रतिक्रिया हो, रिएक्टरहरूको कुशल मिश्रण आवश्यक छ। अल्ट्रासोनिक मिश्रण एक पनि र ठीक मिश्रित समाधान को लागी कुञ्जी हो। Hielscher अल्ट्रासोनिक्स अत्यधिक भरोसेमंद अल्ट्रासोनिक उपकरण को आपूर्ति गर्दछ जो प्रोसेस पैरामीटर र पूर्ण reproducibility को पूरा नियंत्रण को गारंटी दि्छ। वर्षाको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
रसायन र सोनो-रसायनमा अल्ट्रासोनिक्स
रसायन विज्ञान मा अल्ट्रासोनिक अनुप्रयोगहरु प्रत्येक भाग मा भौतिक संश्लेषण सहित, विश्लेषण & दृढता, जैव रसायन, जैविक & अकार्बनिक रसायनशास्त्र, न्यूरोकोमिस्ट्री, परमाणु रसायन विज्ञान साथै इलेक्ट्रोम्याटिक्स। चाहे उच्च शक्ति अल्ट्रासाउन्ड यसको उत्कृष्ट मिश्रित क्षमताओं द्वारा प्रतिक्रियाहरु लाई बढावा दिइन्छ (उदाहरण को लागी इमुलेशन रसायन विज्ञान, चरण ट्रांसफर कैटलिस पीटीसी), सतहहरु सक्रिय गर्दछ (उदा catalysis, sol gel), आवश्यक गतिशील ऊर्जा को योगदान या रासायनिक सेनाहरु (जस्तै Zeta क्षमता, वान-डेड-वाल्स बलों, रिंग-खुल्ला प्रतिक्रियाहरु) को पार गरेर शुरू गर्छ, अद्वितीय परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ।
उत्प्रेरकहरूले रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको रूपान्तरण दर बढाउँछन् र प्रतिक्रिया सुरु गर्न वा पूर्ण रूपान्तरण प्राप्त नभएसम्म प्रतिक्रिया जारी राख्न आवश्यक छ। उत्प्रेरक प्रतिक्रियाहरू प्रायः ढिलो हुन्छन् र अधूरो उच्च शक्ति अल्ट्रासाउन्ड द्वारा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अल्ट्रासोनिकेशन दुवै, बहुमुखी र विषमिक उत्प्रेरक दुवै योगदान गर्दछ र छिटो रूपान्तरण दरहरू र उच्च उपज प्राप्त गर्दछ। अल्ट्रासोनिक सेनाहरूले अत्यधिक प्रतिक्रियात्मक सतहहरू सिर्जना गर्छन् र यसरी उत्प्रेरक गतिविधि बढाउँछन्। यद्यपि उत्प्रेरकहरू आफैलाई भत्काउँदैनन् भने, सतहको भण्डारले समयको उत्प्रेरक गतिविधिलाई कम गर्न सक्छ। ठोस उत्प्रेरकहरूको रूपमा प्रायः दुर्लभ र महंगी धातुहरू चाहिन्छ, लामो जीवनकाल आर्थिक रूपमा आवश्यक पहल हो। अल्ट्रासाउन्ड पूर्ण उत्प्रेरक क्षमता को प्रतिक्रिया को लागि उत्प्रेरक सतह देखि फ्लोलिंग हटाउन को लागि एक सिद्ध तकनीक हो। सोनो-कैटलिसिसेसनको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
रासायनिक प्रतिक्रियाहरू प्रायः ढिलो र अधूरो हुन्छ, यसैले अग्रिमहरूको पूर्ण उपयोगको उपलब्धि वांछनीय छ। उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक्स, तरल पदार्थ मा शारीरिक प्रभाव को उदाहरण को बढाया मा ठूलो हस्तांतरण, पायसीकरण, थोक तापीय हीटिंग, र ठोस (मिलिंग, deagglomeration, सतह सक्रियता, संशोधन) मा विभिन्न प्रभाव को लागि। यी शारीरिक प्रभावहरूले रासायनिक प्रतिक्रियाहरूलाई महत्त्वपूर्ण असर पार्छ। नतिजामा, अल्ट्रासाउन्डले गुणात्मक रासायनिक प्रतिक्रिया जस्तै कैटेलिसन, संश्लेषणलाई योगदान दिन्छ & वर्षा, सल-जेल मार्गहरू, पाईलो रसायन र बहुलक रसायन विज्ञान। हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक उपकरणहरू सोनोकोमिकल अनुप्रयोगका लागि आदर्श हुन् किनभने हेल्सेचर प्रणालीहरू सल्विन्ट्स, एसिड, कुर्सियां ​​र विस्फोटक पदार्थहरू ह्यान्डल गर्न सक्षम छन् (ATEX मूल्याङ्कन अल्ट्रासोनिकरेटर UIP1000hd-Exd)। सबै प्रणालीहरू ब्याच sonication को लागि साथै इनलाइन sonication को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यन्त्रहरू र सहायक उपकरणहरूको व्यापक वर्गीकरणले प्रक्रियाका आवश्यकताहरूलाई मेल खान्छ। सोनो-रसायनको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
अल्ट्राफाइनल नानो-आकारको कणहरू र गोलाकार आकारको कणहरू, पतली फिल्म कोटिंग्स, फाइबर, घोर र घनी सामग्री, साथै अत्यन्त पनीर एरियल र केरेगल्सहरू उच्च प्रदर्शन सामग्रीको विकास र उत्पादनका लागि अत्यधिक सम्भावनात्मक थपिन्छन्। उदाहरणका लागि सिरेमिक्स, अत्यधिक खुट्टा, अल्ट्रा लाइट एयरोगल्स र कार्बनिक अकार्बनिक हाइब्रिड सहित उन्नत सामग्रीहरू Sol-gel विधि मार्फत तरलमा कोलोइड निलम्बन वा बहुलकबाट सिंथेसाइज गर्न सकिन्छ। सामग्रीले अद्वितीय विशेषताहरू देखाउँछ, किनभने उत्पन्न गरिएको कणहरू नैनोमीटर आकारमा दायरामा छन्। अल्ट्रासोनिक सल-जेल मार्ग मार्फत, सानो कण आकारको साथ (जसलाई भनिन्छ सोनोओ-जील्स) गल्सहरू, उच्च तहको सतह क्षेत्र र उच्चतम पोर-भोल्युमहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। हेलसेस्टरको अल्ट्रासोनिक उपकरणको व्यापक दायरा विशिष्ट सामग्री र संस्करणहरूको लागि आदर्श उपकरण विन्यास प्रदान गर्दछ। Sol-gel प्रक्रियाहरूको बारेमा थप पढ्नुहोस्!
अल्ट्रासोनिक रासायनिक गिरावट
रासायनिक कचरा यसको पुन: प्राप्ति र गिरावट प्रदान गर्दछ औद्योगिक प्रक्रियाहरु जस्तै खनन, रसायन निर्माण र लैंडफिल साइटहरु को एक गंभीर समस्या हो। अपशिष्ट र प्रदूषकहरू (उदाहरणको रूपमा माटो, बर्खास्त पानी ...) पुन: प्रयत्न, अपशिष्ट कमी वा डिप्लोमाको सन्दर्भमा प्रशोधन गरिनुपर्छ। सोनाकोमिकल गिरावट एक अत्यन्त सम्भावना प्रक्रिया हो, जुन पर्यावरणीय मित्रता र सजिलो अपरेसनद्वारा यसको बकाया र अनौठो नतिजाको अलावा विशेषता हो। Sonication bond bonds, chain length reduction, आणविक परिमार्जन वा सक्रियता को निष्कर्षमा हुन सक्छ। यसैले, यसले ओक्सिडेशन, स्वाद, सोनोलिसिस र लेचिंगलाई योगदान गर्दछ। अल्ट्रासोनिक रूप देखि सहायता को गिरावट को विशेषता विशेषताहरु लाई रासायनिक रूपान्तरण दर र अल्ट्रासोनिक cavitation को बढावा हो र सोनाकोहमिकल प्रभावहरु लाई एक बेहतर मिश्रण, ऊर्जा इनपुट द्वारा प्रतिक्रियाहरु को शुरुवात, कार्यात्मक समूह को निर्माण (उदाहरणार्थ भित्ता-OH हाइड्रोक्साइल समूह) र कण (उदाहरण एच2O -> एच + र HO-)।
सोनामकरणले बहुलकहरूमा विभिन्न प्रभावहरू छन्: भौतिक प्रकृतिको प्रभावले मिश्रण (जस्तै पाईनेवाला, फैलावट, डैग्लूमेमेसन, एन्कोप्स्युम) र थोक ताप्लेटमा समावेश गर्दछ, रासायनिक प्रभावले मुक्त कण र मुक्त आणविक ढाँचाहरू परिवर्तन गर्दछ। अल्ट्रासाउन्ड बहुलककरणको धेरै तरिकामा योगदान गर्दछ: उच्च शक्ति अल्ट्रासाउन्ड तरंगहरू नैनो-आकारको कणहरू उत्पादन र फैलाउन, गैर-मिस्क्रिल तरल चरणहरू पाईन्छ र मुक्त रेडिकलहरू सिर्जना गर्दछ जसले पाईलो पोलिमरराइजेशनमा योगदान दिन्छ। पोलिमर नैनोमोजेसाइट्स र हाइड्रिकल्स अल्ट्रासाउंड द्वारा सफलतापूर्वक उत्पादन गर्न सक्छन्। यसबाहेक, बहुलकहरूको सतह कार्यक्षमता आधारभूत बहुलकहरूको प्रदर्शन बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र उपयुक्त सामग्रीको विकासमा नयाँ आक्रोश प्रदान गर्छ। वस्तु पोलिमरहरूको सतह गुणस्तर सुधार उच्च आर्थिक हितको हो। यसैले, सफल बहुलक उपचारको लागि सोनाकोम्याटिक सही तरिका हो।
अल्ट्रासोनिक Catalyst Reclamation र पुनरुत्थान
जब एक उत्प्रेरक कण सतह मा अभिकर्ताओं प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया को संपर्क संपर्क सतह मा संचित। यो फ्युलिंग र पासिभिंग तहहरूको साथसाथै यो उत्प्रेरक सतहमा अन्तरक्रिया गर्न अन्य अभिकर्ता अणुहरू ब्लक गर्दछ। अल्ट्रासोनिक cavitation द्वारा र यसैले अंतर-कण टक्करको कारण, कण सतहमा अवशिष्टहरू टूटेको छ र अल्ट्रासोनिक स्ट्रिमिङले तरलमा धोए। कण सतहको सतहमा ज्वरोवेटिभ कटाईले अप्रत्याशित, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील सतहहरू उत्पन्न गर्दछ। अल्पकालिक उच्च तापमान र दबाइहरु लाई आणविक कमी को लागी योगदान र धेरै रासायनिक प्रजातिहरु को प्रतिक्रियाशीलता को बढावा गर्दछ। हेलस्क्रिप्ट अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, उत्प्रेरकहरूको पुनरुत्थान र पुनरुत्थानमा।
Sonoluminiscence अल्ट्रासोनिक cavitation बुलबुले द्वारा इम्प्लिंग अल्ट्रासोनिक cavitation बुलबुले द्वारा तरल माध्यम मा उत्पन्न प्रकाश उत्सर्जन को छोटो फटका घटना को वर्णन गर्दछ। यद्यपि विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् जुन सोलोलम्युनिकसिसको घटनालाई खुलासा गर्ने प्रयास गर्दै, आजसम्म वैज्ञानिकहरूले आफ्नो सिद्धान्तहरू प्रमाणित गर्दैनन्, जसमा हस्प्सटोट, भाइस्टाहलुङ विकिरण, टक्कर-इनडाइड विकिरण र कोरोना निर्वहन, गैरक्लासिटिक लाइट, प्रोटोन टन्निंग, इलेक्ट्रोडिनिक जेटहरू र फ्र्रेटोलमाइनन्ट जेटहरू समावेश छन्। क्वांटम व्याख्या (जो अविरू वा कैसीमिरे प्रभाव संग सम्बन्धित छ) वा थर्मोनल्यूल फ्यूजन प्रतिक्रिया।
जीव विज्ञान र सूक्ष्म जीव विज्ञान मा अल्ट्रासोनिक्स
जैविक र सूक्ष्मजीवविज्ञान प्रणालीमा अल्ट्रासोनिक प्रभाव फरक छ: विच्छेदन & Homogenization, एकत्रित कोलन, सेल र ऊतक lysis (जस्तै जीवाणु, खमीर, भाइरस, अल्गा ...) & इन्ट्रासेलुलियल सामग्री (जस्तै प्रोटीन, एग्रीलेज, रिबोसोम, डीएनए, आरएनए, लिपिड, पेप्टाइड्स ...), बिरुवा सेल परिवर्तन, क्रोमटिन अलगाव र क्यान्सर, क्रोमटिन इम्युनोप्रेसीमेन्सीको निष्कर्षण र सम्बन्धित अनुप्रयोगहरू sonication द्वारा सफलतापूर्वक प्रदर्शन गरिन्छ।
Hielscher अल्ट्रासोनिक्ससँग प्रत्येक व्यक्तिगत अनुप्रयोगको लागि सर्वोत्तम उपयुक्त अल्ट्रासोनिक्स छ। सानो सेलको र परीक्षण ट्यूबहरूको लागि VialTweeter तपाईंको छनौटको यन्त्र हो, जब ल्याब जांच यन्त्र जस्तै Uf200 ः टी वा UP400S सबै भन्दा राम्रो नमूना व्यवहार गर्दछ। बेंच-माथि र व्यावसायिक अनुप्रयोगहरूको लागि, अल्ट्रासाउन्ड सिस्टमबाट 500 वाटहरू सम्म 16,000 वाटहरू ठूलो भोल्युम स्ट्रीम सजिलैसँग ह्यान्डल गर्नुहोस्। विभिन्न सोनोट्रोड्स, प्रवाह कक्षहरू र सहायक उपकरणहरू कार्यक्रम पूरा गर्छन् र सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छन्।
अल्ट्रासोनिक डीएनए, आरएनए र क्रोमटिन शेयरिंग
Deoyxribonucleic एसिड (डीएनए), रिबन्यूक्लिक एसिड (आरएनए) र क्रोमटिन - प्रोटीन संग - जीवन को सबै प्रकार को लागि प्रमुख माक्र्सकोल्युल। डीएनए र आरएनएहरू अणु हुन् जसले जैविक निर्देशका आनुवंशिक निर्देशहरूलाई सङ्केत गर्दछ। Chromatin डीएनए र प्रोटीन को संयोजन हो जहाँ कक्ष न्यूक्लियस को सामाग्री बनाइयो। अनुसन्धान उद्देश्यको लागि, यो आणविक भवन निर्माण ब्लकहरूलाई सानो घटकहरूमा टुक्रा गर्न आवश्यक छ र तिनीहरूलाई विश्लेषण गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई इम्युनोप्रेसी र क्रसलिंकिंग समयमा पुन: व्यवस्थित गर्न। डीएनए, आरएनए र क्रोमिनन क्यान्सरको लागिटुक्राको आकार धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सबै महत्त्वपूर्ण प्यारामिटरहरूमा पूर्ण नियन्त्रण गरेर, अल्ट्रासाउन्ड लक्षित अणु विच्छेदको लागि सक्षम गर्दछ। उदाहरणका लागि, आदर्श क्रोमिनट फ्रिज लम्बाई 200 र 1000 बीपी बीचमा पर्दछ। अल्ट्रासोनिक क्यान्सर फल्स मोडमा फटस्टद्वारा प्राप्त गरिन्छ। बुद्धिमानी यन्त्रहरू र सहायक उपकरणहरूको कारण, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ध्वनिकरण, नमूना ठंडा, डिजिटल प्रक्रिया रेकर्डिङ जस्ता प्रोसेस आवश्यकताहरू हेलसेस्टरको अल्ट्रासोनिक उपकरणद्वारा प्रदान गरिएको छ। यसले सफलतापूर्वक सूक्ष्मजीवविज्ञान प्रक्रिया र अपरेशन सान्त्वना सुनिश्चित गर्दछ।
अल्ट्रासोनिक्स को लागि पेंट, मसी र पिगहरु
पेंटमा, कोटिंग र स्याही उद्योगहरू, कणहरू उत्पादन ढाँचाका लागि आवश्यक कच्चा सामग्री हुन्। उच्च गुणस्तरका उत्पादहरूका लागि अपेक्षित विशेषताहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्, यहां सम्म कि र विश्वसनीय कण प्रकृया महत्वपूर्ण छ। कण आकार को मुख्य कारक हो जसले अन्तिम उत्पादन को गुणहरुलाई प्रभावित गर्दछ। उच्च पावर अल्ट्रासाउन्ड माइक्र्रोन र नैनो आकार मिलिंग र deagglomeration को लागि प्रभावी माध्यम हो - बिना कि परेशानी जो कि मिलिंग मिडिया या नोजल्स को उपयोग गरेर।
मसी र मसी जेट मसीहरूको लागिकण आकारको प्रमुख गुणस्तर हो: सुन्तलाहरू धेरै सानो छन्, मसीले यसको उत्खनन शक्ति गुमाउँछ – सुँगुरहरू धेरै ठूलो छन्, प्रिन्टर नोजल क्लोग गरीब प्रिन्टआउटहरूमा। अल्ट्रासोसनले एसिसेन्सिङ मिलिंग र deagglomeration परिणामहरू वास्तवमा प्रोसेसिंग प्यारामिटरहरू समायोजन गर्न अनुमति दिन्छ। जब आदर्श अल्ट्रासोनिक प्रसोधन मापदण्डहरू एकै पटक भेटिए, तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्ने कुनै कारण छैन। निरन्तर इनलाइन उत्पादनले उच्चतम उत्पादन गुणस्तरको उत्पादनको लागि सक्षम बनाउँछ। निर्माण को भित्र कण वितरण को उत्पादन को विशेषताहरु को अभिव्यक्ति को लागि महत्वपूर्ण छ। केवल यदि कण समान रूपमा र समान रूपमा फैलिएको हो भने, अन्तिम उत्पादनले संतोषजनक गुण देखाउँछ, जस्तै पारदर्शिता, यूवी प्रतिरोध, कोटिंग्स को खरोंच प्रतिरोध। विष्फोट अल्ट्रासाउन्डको प्रमाणित पावर अनुप्रयोगहरू मध्ये एक हो।
प्रसाधन सामाग्री र व्यक्तिगत केयर उत्पादनका लागि अल्ट्रासोनिक्स
लागि प्रसाधन सामग्रीको उत्पादन, सामाग्री को मिश्रण एक आवश्यक कदम हो। उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक्स राम्रो आकार homogenizing, dispersing र पायसीकरण मा विश्वसनीय परिणाम प्राप्त गर्दछ - उदाहरणका लागि क्रीम र लोशनको लागि, नेल वार्निश, र मेकअप अप उत्पादन। संयोजक अनुप्रयोगहरु को अलावा, अल्ट्रासाउंड निष्कर्षण र सेल परिमार्जन को लागि जानिन्छ (जस्तै लिपोसोमहरू), पनि। उदाहरणका लागि लिपिड, प्रोटीन, अरोमाटिक यौगिकहरू वा कक्षहरूको रङहरूका लागि अल्ट्रासाउन्ड नयाँ ढाँचाका लागि उच्च क्षमताको उपकरण हो।
फार्मास्यूटिकल्स को लागि अल्ट्रासोनिक्स
औषधि उद्योगमा अल्ट्रासाउन्डका अनुप्रयोगहरू गुणात्मक छन्: रासायनिक यौगिकों को संश्लेषण, सक्रिय यौगिकों को निकालन (जस्तै फिनेल, पौधों देखि flavonoids), emulsification (लोशन, क्रीम र ointments), liposome तैयारी (encapsulation), वा भाइरस र रोगजननहरूको निष्क्रियता टीका। दबाइहरु को उत्पादन मा, हेलसेस्टर अल्ट्रासोनिक्स को उपयोग को बेहतर उत्पादन को द्वारा बढेको उत्पादन क्षमता को लागि अनुमति दि्छ। विश्वसनीय औद्योगिक अल्ट्रासोनिक यन्त्रहरूको प्रतिक्रियाले ठूलो मात्रामा चलाउन सकिन्छ - ब्याच प्रक्रिया वा एक प्रवाह सेल रिएक्टरमा निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा।
अल्फ्रासोनिक उत्पादनको जैव ईफल्स
ऊर्जा क्षेत्र अल्ट्रासोनिक्स को सफल र कुशल उपयोग को लागि गुप्त अनुप्रयोगहरु लाई प्रदान गर्दछ। सबैभन्दा लोकप्रिय र राम्ररी आवेदन अनुप्रयोग अल्ट्रासोनिक रूपमा सहयोग हुन सक्छ biodiesel उत्पादन (कुखुराबाट ट्राईजिस्टरेशन वा प्रयोग / अपशिष्ट वनस्पति तेल (यूवीओ; WVO) / जीविका बोसोडेलको लागि), जुन उच्च उपज र गुणस्तरमा परिणाम हुन्छ, कम मेथनोल प्रयोग र एकदम छिटो परिवर्तन। जब बायोडाइडल फिडस्टकले 2-3% भन्दा बढी फैटी एसिड (एफएफए) समावेश गर्छ भने, एसिड एस्टेर्मेशन उच्च साबुनको निर्माणबाट बच्नको लागि एसिड एस्टेन्टिभ एक उपयोगी उत्थान हो। यसबाहेक transesterification र एस्टेेरेशन प्रक्रियाहरु, उच्च शक्ति अल्ट्रासाउंड फसल देखि तेल को निकालन को समर्थन गर्दछ (उदाहरणार्थ rapeseed, सोया, canola, मकई, हथेली, मूंगफली, नरिवल, जट्रोफा आदि), या अल्गा।
बायोथेनल एक हरी ईंन्धन हो जुन मकै, फसल, आलु, अयस्क, चावल आदिको स्टार्च र चाँदी आदि जब प्राप्त गरिन्छ, खमीर कोशिकाहरु इथेनॉलमा किरिन्छ। पावर अल्ट्रासोनिक्सको आवेदन गरेर, बिरुवा कक्षहरू बाधा भइरहेको छ र इन्टरसेल्युल सामग्री निकालिन्छ ताकि फेडस्ट्रक एंजाइमिक पाचनको लागि उपलब्ध छ। यसरी, स्टार्च र शंकर किण्वनका लागि राम्रो उपलब्ध छ जुन तीव्र र अधिक पूर्ण रूपान्तरण र उच्च उपजको परिणामस्वरूप।
अल्ट्रासोनिक्स ई ईन्धन, ऊर्जा, तेल र ग्याँस
अल्ट्रासोनिक homogenizing प्रविधी स्थिर र अस्थिर पायस उत्पादनको लागि धेरै प्रभावकारी छ, जसले सफल सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। aquafuels। यसैले, ईंन्धनहरू अत्यधिक भारी ईंन्धनहरू जस्तै जहाज डीजल पानीसँग पराजित हुन्छ। पानी-इन्फ्लुड ईन्धन नतिजाको प्रयोग एक अधिक कुशल दहन र कुनै पनि महत्वपूर्ण कमी माएक्स उत्सर्जन। अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो कोयला को अल्ट्रासोनिक उपचार।
खाद्य, डेयरी र पेय विनिर्माण मा अल्ट्रासोनिक प्रक्रियाहरु
हल्का खाना प्रशोधन अधिक र अधिक महत्त्वपूर्ण छ किनभने ग्राहकहरूले ताजा, ठूलो मात्रामा प्राकृतिक खानाको लागि बढ्दो मागको कारण। यस प्रकार, मिश्रण को लागी सामान्य प्रक्रिया चरणहरु को लागि & homogenization, निष्कर्षण, स्थिरीकरण & संरक्षण, पारंपरिक विधिहरू वृद्धिशील रूपमा अभिनव प्रविधि प्रविधिहरू जस्तै अल्ट्रासोनिक्स द्वारा प्रतिस्थापित गरिन्छ, जुन भोजनको लागि गैर-थर्मल विधि हो। Sonication को लाभ यसको हल्का, छिटो र सफा प्रसंस्करणमा आधारित हुन्छन्, फलस्वरूप कम उत्पादन हानि र तातोपन र भिटामिन संरक्षण गरेर सुधारिएको खानाको गुण। हेलस्चरको अल्ट्रासोनिक प्रोसेसरहरूले खाद्य उद्योगमा बचाउनुपर्ने अनुप्रयोगहरूको लागि प्रयोगको रूपमा प्रयोग गरिन्छ & माइक्रोबियल निष्क्रियता, homogenization, स्थिरीकरण & रस को संरक्षण, purees र Smoothies, स्वाद र fructose (चीनी) को निकासी, viscosity कमी को लागि कतरनी thinning, परिपक्वता रक्सी र balsamic सिरका, रक्सी शोधन & स्वादयुक्त, क्लाउड इमुलेन्स, आइसक्रीम (बर्फ न्युलेसन र ठूलो ट्राफिकलाई बढावा दिन), पोषक तत्वका लागि अल्गा निकासी, चकलेटको खुसी गर्नका लागि चीनी क्रिस्टल ब्रेक, तरल पदार्थ प्रिय, खाद्य तेल को परिष्करण … खाद्य र पेयका लागि अल्ट्रासोनिक्सको बारेमा थप पढ्नुहोस्!